Saraakiisha Ciidanka X.D.S oo sheegay in ay dileen Ku xigeenkii Shabaab ee Sh/Hoose | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Saraakiisha Ciidanka X.D.S oo sheegay in ay dileen Ku xigeenkii Shabaab ee...
Saraakiisha Ciidanka X.D.S oo sheegay in ay dileen Ku xigeenkii Shabaab ee Sh/Hoose
Saraakiisha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qeybta ku sugan Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen in ay dileen ku xigeenkii Al-shabaab ee Gobolkaasi.
Howlgalka lagu dilay Sarkaalkan Shabaab ka tirsanaa ayay Saraakiishu sheegeen inuu si gaar ah uga dhacay degaan hoos yimaada degmada Aw-dheegle oo ka tirsan Shabeellaha Hoose.
Sarkaakiill ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Idaacadda Codka Ciidamada Qalabka Sida u xaqiijiyay dilka ku xigeenkii Shabaab ee Gobolka Shabeellaha Hoose, kaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamad Abuu-Cabdalla.
Howlgalkan oo ay fuliyeen cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay 10 Dagaalame oo ka tirsanaa Al-shabaab, kuwaasi oo ilaalo u ahaa wadaadka la dilay.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka waxa ay sheegeen xiliga uu dhacayay Howlgalka lagu dilay ninkan Shabaab ka tirsanaa in uu waday qorshe dagaal oo ka dhan ah ciidamada Dowlada ee fariisimaha ku leh gobolka Shabeellaha Hoose.
Ugu dambeyn Saraakiisha ayaa tilmaamay in magaca ninkan oo dhameystiran iyo xubnaha kale magacyadooda ay soo bandhigi doonaan sacadaha soo aadan, hadana ay wadaan baaritaanada dhabta ah ee la xiriira Howlgalkan.